I-DandyLoop: Yabelana nabathengi kwi-Intanethi phakathi kweeVenkile | Martech Zone
I-DandyLoop: Yabelana nabathengi kwi-Intanethi phakathi kweeVenkile
NgoMgqibelo, Disemba 6, 2014 NgoMvulo, Februwari 8, 2016 Douglas Karr
Ukuziqhelanisa okuxhaphakileyo kwiinkalo ezininzi ezikwi-Intanethi yintsebenziswano phakathi kweenkampani ezahlukeneyo ezisebenza kuloo ndawo, inkulu okanye incinci. Oku kuqheleke kakhulu kwii -apps zeselfowuni, kwimidlalo ye-Intanethi, kwimixholo yevidiyo, nakwindawo zomxholo. Kwiindawo ezinomxholo sibona isindululo esihambelanayo somxholo phakathi kweesayithi, nokuba bakhuphisana ngazo. Kunzima ukufumana abaphathi abangayi kuxhasa lo mkhuba. Nangona kunjalo, ifuna inqanaba eliphezulu lokuvuthwa kwiinkampani ezisentsimini-kufuneka baqonde ukuba ukwabelana ayisiyondlela inye yokunika, kunendlela ezimbini-wonke umntu uyaphumelela.
Ngaphandle kokuba nathi ukususela ekuqaleni kwe-intanethi, kuphela kwiminyaka yakutshanje apho ishishini le-eCommerce laqala ukuzilawula ngokwalo. Ukwanda kwezixhobo ze-SaaS kwenza ukuba iivenkile ezikwi-Intanethi zande ngakumbi kwaye zivulwe, kwaye namhlanje zingaphezulu kwe-12m yazo. Inye into ebilahlekile apha kukuziqhelanisa nentsebenziswano: iivenkile zisabotshelelwe kwizikimu zentengiso ezibizayo, kwaye bajonge iindlela ezintsha zokufikelela kubathengi abanokubakho-kwezentlalo yayikunye, kwaye ke umxholo. Ngoku bayakuqonda ukubaluleka kwentsebenziswano, ukanti abanandlela yakukwenza.
Eyona ndlela ilungileyo yokusebenzisana phakathi kwevenkile ezikwi-Intanethi zikwimveliso yazo ephambili yokuthengisa. Nje ukuba iivenkile ezimbini ezinxulumene nazo zigqibe ekubeni zisebenzisane kwaye zicebise kwiimveliso zomnye nomnye, sibona i-CTR ephezulu kunayo nayiphi na into esiyaziyo kwintengiso yesiko (ngaphezulu kwe-7% ngokomndilili). Kungenxa yokuba ngokungafaniyo nentengiso yemveli - nantsi ixabiso kwi-shopper liyinyani- yile nto ayijongileyo xa uthenga.
DandyLoop yenza intsebenzo yentsebenziswano kusetyenziswa iqonga lokusebenzisana kwiivenkile ezikwi-Intanethi, apho ivenkile nganye inokufumana kwaye imeme ezinye iivenkile ukuba zisebenzisane, oko kuthetha ukuba baya kuthi bacebisane ngemveliso yomnye nomnye. Oku kuya kwelinye icala-ivenkile nganye inokufunyanwa kwaye imenywe ukuba liqabane nabanye. Banokulawula imisebenzi yabo yenethiwekhi kwaye babeke esweni ukusebenza kweqabane ngalinye.
Intsebenziswano isekwe kukulingana, kwaye kulapho ialgorithm yethu yobumnini ithatha ulawulo- kulo lonke undwendwe olunikezelwa yivenkile kwelinye lamaqabane alo, luya kufumana undwendwe olutsha kraca. 1 for 1. Oku kwahlukile kwihlabathi le-eCommerce: abathengi bethu abekho kwishishini lokuthengisa ukugcwala ngemali, bakwishishini lokuthengisa iimveliso-kwaye yile nto siyibonelelayo-ukugcwala kwabantu abaninzi, iindwendwe ezininzi kunye nokuthengisa ngakumbi.
Okwangoku i-beta ye Shopify abasebenzisi, DandyLoop inikezela ngolawulo olupheleleyo kwiimveliso zakho ezicetyiswayo, iingxelo ezibonakalayo kunye nokuseta ngokukhawuleza nangokulula!
tags: idandyloopukukhuthazwa kwe-ecommercethengaukwabelana ngeendwendwe
Izizathu ezi-5 zokuCacisa ukuQesha iArhente yokuThengisa ngeDijithali
Ingxelo: i-68% yee-CEO ayinabo ubukho bezeNtlalontle